एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको आइपीओ दोश्रो दिनमै ओभरसब्स्क्राइब्ड, कति आयो आवेदन ? Bizshala -
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको आइपीओ दोश्रो दिनमै ओभरसब्स्क्राइब्ड, कति आयो आवेदन ?
काठमाण्डौ । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आइपीओ दोश्रो दिन नबित्दै ओभरसब्स्क्राइब्ड भएको छ ।
शनिवार दिउँसो २ः३० बजेसम्म आइपीओमा ९८ हजार ७९७ आवेदकले ४१ लाख ४० हजार ३० कित्ता खरीदका लागि आवेदन दिएका बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलले जनाएको छ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १०० अंकित दरका कुल ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेकोमा सोमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६९ हजार ९०२ कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँट गरिएको छ भने २ प्रतिशत अर्थात ६७ हजार ९६१ किता सेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी ३१ लाख ६० हजार १८३ कित्तामा सर्वसाधारणले खरिद आवेदन दिन पाउनेछन्।